U Myat Aung Transport Co.,Ltd
(+95) 09-5200439, 09-791211552, 09-965200439
U Myat Aung Transport Co.,Ltd
Welcome to U Myat Aung Transport Co.,Ltd.
ဦးမြတ်​​အောင်​ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေးကုမ္ပဏီမှ ကြိုဆိုပါတယ်​ ရှင်​။
Although U Myat Aung Transport Co., Ltd. was established in 2008 officially asaregistered company, in fact this business was started in 1950s asalocal traditional SME. The head quarter of the company is located in Yangon.
ဦးမြတ်​​အောင်​ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေးကုမ္ပဏီအား ၂၀၀၈ခုနှစ်​တွင်​ တရားဝင်​မှတ်​ပုံတင်​ခဲ့​သော်​လည်း ယင်းလုပ်​ငန်းအား စတင်​​ဆောင်​ရွက်​ခဲ့သည်​မှာ ၁၉၅၀ခုနှစ်​ ဖြစ်​ပါသည်​။ ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးချုပ်​သည်​ ရန်​ကုန်​တွင်​ တည်​ရှိပါသည်​။
The Company has been providing its towards more than two dozens of international clients and numbers of local businesses since 2008. So far there are hundreds of successfully completed projects and company has recrived well acknowledgement form UN Logistics Cluster and many humanitarian organizations regarding our relaible service and very reasonable price during 2008 Nargis cyclone emergency response operation, 2011 Giri cyclone emergency response operation, 2O12 Tarlay earthquake emergency response operation, humanitarian supply transportation to Rakhine state, prolonged Kachin armed conflict humanitarian supply transportation and 2015 flood respectively.
ကုမ္ပဏီသည်​ ၂၀၀၈ခုနှစ်​ကတည်းက နိုင်​ငံတကာမှ ​ဖောက်​ သည်​များစွာ နှင့်​ ပြည်​တွင်းမှလုပ်​ငန်းများစွာ အတွက်​ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ ပေးခဲ့ပါသည်​။ ​အောင်​မြင်​စွာပြီး​မြောက်​ခဲ့​သော စီမံချက်​များစွာရှိခဲ့​ပါသည်​။ ၂၀၀၈ နာဂစ်​ ဆိုင်​ကလုန်း အ​ရေး​ပေါ် ပို့​ဆောင်​​ခြင်းလုပ်​ငန်း၊ ၂၀၁၁ ဂီရိ ဆိုင်​ကလုန်း အ​ရေး​ပေါ် ပို့​ဆောင်​​ခြင်းလုပ်​ငန်း၊ ၂၀၁၂ တာ​လေး ငလျှင်​ အ​ရေး​ပေါ် ပို့​ဆောင်​​ခြင်းလုပ်​ငန်း၊ လူလူချင်းစာနာ​ သော ​ထောက်​ပံ့ပစ္စည်းများကို ရခိုင်​ပြည်​နယ်​သို့ ပို့​ဆောင်​ခြင်းလုပ်​ငန်း၊ ကာလရှည်​ကြာ​သောကချင်​ပြည်​ နယ်​တိုက်​ပွဲ၏ စစ်​​ဘေးဒုက္ခသည်​များသို့ လူလူချင်းစာနာ​သော ​ထောက်​ပံ့ပစ္စည်းများကို ပို့​ဆောင်​ခြင်းလုပ်​ငန်းနှင့်​ ၂၀၁၅ ​ရေကြီးခြင်းတို့တွင်​ ကျွနု​ပ်​တို့ ကုမ္ပဏီ၏ ယုံကြည်​စိတ်​ချရ​သော ၀န်​​ဆောင်​မှု၊ သင့်​တင့်​မျှတ​သော ​ဈေးနှုန်းတို့​ကြောင့်​ UN Logistics Cluster နှင့်​ လူလူချင်းစာနာ​သော အဖွဲ့အစည်းများစွာမှ အသိအမှတ်​ ပြုမှုများကို ရရှိခဲ့ပါသည်​။
All the transportation services are being managed and provided with 100 staffs around the country 24/7. Moreover 34 cargo trucks,3sets of berge and tug boat combined fleet is being utilized in daily operation. The toonage of handling capacity by cargo trucks through land routes is 30000 tons annually and the tonnage of handling capacity of water ways is 192,000 tons (for short distance) and 24,OOO tons (for long distance ) each annually. Main fleet station is in Yangon and there are eight more sub-station of fleet units in both Taung Gup , Sittwe, Maungdaw (Southern and Northern parts of Rakhine), Mandalay (Mandalay region and middle part of country), Pathein (Ayarwaddy), TaungGyi (Shan) Myeik and Pakokku. All the operators of trucks and tug boats of our company are experienced and licensed operators and drivers.
ကျွနု​ပ်​တို့ ကုမ္ပဏီ၏ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေးဝန်​​ဆောင်​ မှုအားလုံးကို ၀န်​ထမ်း ၁၀၀ ဖြင့်​ ၂၄ နာရီ ၇ရက်​ပတ်​လုံး မြန်​မာပြည်​အန့ စီမံခန့်​ခွဲ ၀န်​​ဆောင်​​ပေး​နေပါသည်​။ ကုန်​တင်​ကားကြီး ၃၄ စီး၊ ​လှေ သ​င်္ဘော အစု ၃ စုတို့ကို ​နေ့စဉ်​ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေးတွင်​ အသုံးပြု​နေပါသည်​။ နှစ်​စဉ်​ ကုန်းလမ်း​ကြောင်းသယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေးမှာ တန်​ချိန်​ ၃၀၀၀၀ ရှိပြီး ​ရေလမ်းသယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေးမှာ ခရီးတိုအတွက်​ တန်​ချိန်​ ၁၉၂၀၀၀ ရှိပြီး ခရီးရှည်​အတွက်​ တန်​ချိန်​ ၂၄၀၀၀ ရှိပါသည်​။ အဓိက သ​င်္ဘောဆိုက်​ကပ်​ရာ​နေရာက​တော့ ရန်​ကုန်​ဖြစ်​ပြီး သ​ င်္ဘောဆိုက်​ကပ်​ရာ တစ်​ခြားမြို့နယ်​ခွဲများက​တော့ ​တောင်​ဂပ်​၊ စစ်​​တွေ၊ ​မောင်း​ တော (ရခိုင်​ပြည်​နယ်​ ​တောင်​ပို​င်းနှင့်​မြောက်​ပိုင်း)၊ မန္တ​လေး(မန္တ​လေးတိုင်းနှင့်​ မြန်​မာပြည်​ အလယ်​ပိုင်း)၊ ပုသိမ်​(ဧရာဝတီတိုင်း)၊ ​တောင်​ကြီး(ရှမ်းပြည်​နယ်​)၊ မြိတ်​နှင့်​ ပခုက္ကူ တို့ ဖြစ်​ပါသည်​။ ကျွနု​ပ်​တို့ ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်​တင်​ကားကြီးများနှင့်​ လှေ သ​င်္ဘော​မောင်းနှင်​သူများသည်​ အ​တွေ့အကြုံများစွာရှိ​သော လိုင်​စင်​ရထားသူများဖြစ်​ပါသည်​။
We are able to start our service within six hours after having signed contract and the quoted price or rate of our service charges in the proposal or contract will remain one year long period without any charges no matter what happen.
လူကြီးမင်းတို့နှင့်​ စာချုပ်​ချုပ်​ဆိုပြီး ကျွနု​ပ်​တို့သည်​ ၆နာရီအတွင်း ကျွနု​ပ်​တို့၏ ၀န်​​ဆောင်​မှုကို စတင်​​ဆောင်​ရွက်​ ပါသည်​။ အဆိုပြုလွှာ သို့မဟုတ်​ စာချုပ်​တွင်​ပါဝင်​​သော ကျွနု​ပ်​တို့၏၀န်​​ဆောင်​မှုအတွက်​ ကျသင့်​​သည့်​ ​ဈေးနှုန်းသည်​ တစ်​နှစ်​ကြာကာလအတွင်း တစ်​ခြားကုန်​ကျစရိတ်​မရှိပဲ ဆက်​လက်​တည်​ရှိပါမည်​။
Our company has been taking care welfare of the staffs as well. We haveafinancial supporting mechanism for the staffs in case of emergency or funeral cases. Majority of our staffs have minimal five years of service as well.
ကျွနု​ပ်​တို့ ကုမ္ပဏီသည်​ ၀န်​ထမ်းများ၏လူမှုဘ၀ သက်​သာ​ချောင်​ချိ​ရေးကို အ​လေး​ပေး​ဆောင်​ရွက်​​နေပါသည်​။ ကျွနု​ပ်​တို့ ကုမ္ပဏီတွင်​ ၀န်​ထမ်းများ၏ အ​ရေး​ပေါ်ကိစ္စများ သို့မဟုတ်​ နာ​ရေးကိစ္စများအတွက်​ ​ထောက်​ပံ့​ငွေ​ပေးသည့်​စနစ်​ သတ်​ မှတ်​ထားပါသည်​။ ကျွနု​ပ်​တို့ ကုမ္ပဏီ၏ ၀န်​ထမ်းအများစုသည်​ အနည်းဆုံး လုပ်​သက်​ ၅နှစ်​ရှိ​သော အ​တွေ့အကြုံရှိ​သော ၀န်​ထမ်းများဖြစ်​ပါသည်​။
Since 2008 Form up to now, major clients of our company are as follow:
၂၀၀၈ ခုနှစ်​မှစ၍ ယ​နေ့အထိ ကျွနု​ပ်​တို့ ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက​ဖောက်​သည်​များကို အောက်​ပါဇယားကွက်​တွင်​ ​ဖော်​ ပြထားပါသည်​။
The highest amount of transportation contract was one million USD worth, with one of our international clients. Financial capability of our company is two million USD at the moment. According to our reputation in this special expertise, many of our clients gave good recommendation to their other partners and they became our regular customers again We are very pleased to inform you about our accountability and clean track record tor your consideration. We are looking forward to working with you in near future.
ကျွနု​ပ်​တို့ ကုမ္ပဏီ၏ အပြည်​ပြည်​ဆိုင်​ရာ​ဖောက်​သည်​ များအနက်​မှ ​ဖောက်​သည်​တစ်​ဦးနှင့်​ ချုပ်​ဆိုခဲ့သည့်​ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေးစာချုပ်​၏ အမြင့်​ဆုံးတန်​ဖိုးမှာ ​အ​မေရိကန်​​ဒေါ်လာ ၁ သန်းတန်​ဖိုးရှိပါသည်​။ ယခုလက်​ရှိတွင်​ ကျွနု​ပ်​တို့ ကုမ္ပဏီ၏ ​ငွေ​ကြေးဆိုင်​ရာ လည်​ ပတ်​မှုမှာ အ​မေရိကန်​​ဒေါ်လာ ၂ သန်း ဖြစ်​ပါသည်​။ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေး​လောကတွင်​ ကျွနု​ပ်​တို့ကုမ္ပဏီ၏ နာမည်​ဂုဏ်​သတင်း၊ ကျွမ်းကျင်​မှုတို့​ကြောင့်​ ကျွနု​ပ်​ တို့ကုမ္ပဏီ၏ ​ဖောက်​သည်​အများစုသည်​ သူတို့၏တစ်​ခြား မိတ်​ဖက်​များသို့ ​ကောင်း​သောအကြံပြု​ထောက်​ခံမှုများ​ပေးခြင်း၊ ထိုသူများသည်​လည်း ကျွနု​ပ်​တို့ ကုမ္ပဏီ၏ အမြဲတမ်း​ဖောက်​သည်​များဖြစ်​ လာပါသည်​။ ကျွနု​ပ်​တို့၏ လုပ်​ငန်းနှင့်​ပတ်​သတ်​၍ တာဝန်​ခံမှုအ​ကြောင်းကို လူကြီးမင်းအား သတင်း​ပေးရသည့်​အတွက်​ အလွန်​၀မ်း​ မြောက်​မိပါသည်​။ ကျွနု​ပ်​တို့ သိပ်​မကြာ​သော အနာဂတ်​ကာလတွင်​ လူကြီးမင်းနှင့်​ အလုပ်​တွဲလုပ်​ရမည်​ကို ​မျှော်​လင့်​​နေပါသည်​။
We offer from3to 32 tons acording to our clients’ needs.
ကျွနု​ပ်​တို့ကုမ္ပဏီ၏ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေး​၀န်​​ဆောင်​မှုတွင်​ လူကြီးမင်း၏လိုအပ်​ချက်​အရ ၃ တန်​မှ ၃၂ တန်​အထိ ၀န်​​ဆောင်​​ပေး​နေပါသည်​။
We provide flexible logistics capabilites that are delivery services (Door to Door) of your goods. According to your business needs, we make plan, pick up, move or deliver, including domestics transportation, project cargo, warehousing and valuable services.
ကျွနု​ပ်​တို့ကုမ္ပဏီသည်​ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေး​၀န်​​ဆောင်​မှုပြုလုပ်​ရာတွင်​ လူကြီးမင်းတို့၏ ကုန်​ပစ္စည်းများကို လူကြီးမင်းပို့​ဆောင်​လိုသည့်​​နေရာအ​ထိ ​ရောက်​ရှိ​အောင်​ ၀န်​​ဆောင်​မှု​ပေး​နေပါသည်​။ လူကြီးမင်းလုပ်​ငန်းလိုအပ်​ချက်​အရ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေး​၀န်​​ဆောင်​မှုအတွက်​ ကျွနု​ပ်​တို့သည်​ အစီအစဉ်​များ ​ရေးဆွဲခြင်း၊ လူကြီးမင်းတို့၏ ကုန်​ပစ္စည်းများဝင်​ယူခြင်း၊ လိုအပ်​သည့်​ ထုတ်​ပိုးမှုများပြုလုပ်​ခြင်း၊ သို​လှောင်​ထားခြင်း၊ ပို့​ဆောင်​ခြင်း အစရှိသည့်​ တန်​ဖိုးရှိ​သော ၀န်​​ဆောင်​မှုများကို ပြုလုပ်​​ပေး​ နေပါသည်​။
We operates in many varieties of Project transport types safety and timely delivery on not only domestic movement but also complex movement to arrive at the promised time.
ကျွနု​ပ်​တို့ကုမ္ပဏီသည်​ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေး​အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးတို့ကို အိမ်​​ပြောင်းအိမ်​​ရွှေ့သာမက ခက်​ခဲရှုပ်​​ထွေး​သောပြောင်း​ရွှေ့မှုများကိုပါ သတ်​မှတ်​ထား​သောအချိန်​တွင်​ ​ရောက်​ရှိ​စေရန်​ ​ဆောင်​ရွက်​​ပေး​နေပါသည်​။
Our experienced teams store your goods into our warehouses and registration your products and checking the goods for defects and damage, Repack the goods, Crating Services to your goods with Cargo Insurance.
ကျွနု​ပ်​တို့ကုမ္ပဏီ၏ အ​တွေ့အကြုံရှိ​သော ၀န်​ထမ်းများသည်​ လူကြီးမင်းတို့၏ ကုန်​ပစ္စည်းများကို ကျွနု​ပ်​တို့ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်​​လှောင်​ရုံတွင်​ သို​လှောင်​ထားခြင်း၊ မှတ်​တမ်းတင်​ထားခြင်း၊ အပြစ်​အနာအဆာ ပျက်​စီးမှုများရှိမရှိ စစ်​​ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်​ သည့်​ ထုတ်​ပိုးမှုများပြုလုပ်​ခြင်း၊ ကုန်​ပစ္စည်းအာမခံနှင့်​အတူ ကုန်​​သေတ္တာများတွင်​ ထည့်​ခြင်း လူကြီးမင်းပို့​ဆောင်​လိုသည့်​​နေရာအ​ထိ ​ရောက်​ရှိ​အောင်​ ပို့​ဆောင်​ခြင်း အစရှိသည့်​ တန်​ဖိုးရှိ​သော ၀န်​​ဆောင်​မှုများကို ပြုလုပ်​​ပေး​နေပါသည်​။
We do all of our activities professionally with our team power.
ကျွနု​ပ်​တို့ကုမ္ပဏီ၏ အ​တွေ့အကြုံရှိ​သော ၀န်​ထမ်းများသည်​ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေး​၀န်​​ဆောင်​မှုအဆင့်​အားလုံးကို ကျွမ်းကျင်​​ပညာရှင်​ပီသစွာ အသင်းအဖွဲ့စွမ်းအားဖြင့်​ ​ဆောင်​ရွက်​​ပေး​နေပါသည်​။
Our company define the charges of our service depend on your goods' quantities, weight, shape, size and value with negotiable price.
ကျွနု​ပ်​တို့ ကုမ္ပဏီ၏ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေးဝန်​​ဆောင်​မှုအတွက်​ ​ဈေးနှုန်း​သတ်​မှတ်​ချက်​နှင့်​ပတ်​သတ်​၍ ပစ္စည်း ပမာဏ အနည်းအများ၊ ပစ္စည်း အ​နေအထား အ​လေးချိန်​၊ ပစ္စည်းတန်​ဖိုး​ပေါမူတည်​ပြီး ​ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်​ပါသည်​။
All the transportation services are being managed and provided with 100 staffs around the country 24/7.
ကျွနု​ပ်​တို့ ကုမ္ပဏီ၏ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေးဝန်​​ဆောင်​ မှုအားလုံးကို ၀န်​ထမ်း ၁၀၀ ဖြင့်​ ၂၄ နာရီ ၇ရက်​ပတ်​လုံး မြန်​မာပြည်​အန့ စီမံခန့်​ခွဲ ၀န်​​ဆောင်​​ပေး​နေပါသည်​။
Our Motto, Values, Vision and Mission
“Customer satisfaction is our first priority.”
The Best Quality and Reliable Service
To give the best quality service to the customer for getting reliability in the result.
To beapopular and reliable company
No. 25, Aye Yeik Mon Street,3Qtr, Hlaing Township, Yangon, Myanmar.
No. (1/36), Pearl Road, Near Pearl Junction, Shwe Pyi Thar Tsp, Yangon.
© 2018 U Myat Aung Transport Co.,Ltd. All rights reserved | Powered by Freelance Web Service